Ride Bilisaa - Seattle Traffic
Dhokdhokkeen ykn Scooter’tin Low Bridge irra cehuun ykn maayila keessan isa jalqabaa/dhumaa haguuguun tooftaa filatamaa dha. Lime fi LINK hojjettoota baay’ee barbaachisoo ta’anii fi namoota gara beellamoota talaallii COVID-19’tti imalaa jiraniif Raayidii Bilisaa kennaa jiru. Waa’ee dhokdhokkee fi Scooter odeeffannoo dabalataa beekuuf, share.
Ogeeyyii fayyaa hawaasaa fi qondaaltota seera kabajchiisaniif raayidii bilisaa daqiiqaa-30. Enroll now (Amma galmaa’aa). Akkasumas, raayidii bilisaa kan bellamoota talaallii, app sana keessatti, koodii beeksisaa: SEARIDETORECOVERY galchaa
Raayidiiwwan e-scooter bilisaa hojjetoota kunuunsa fayyaa, barnootaa, tiraanziitii uummataa, seera kabajchiisanii fi tajaajila nyaataa’tiif; Galmeen amma. Akkasumas, beellamoota talaalliif raayidii bilisaa; Amma galma’aa.